Toro lalana hiarovana ny fampiasam-bolanao amin'ny lalàna UAE: Torohevitra ara-dalàna ho an'ireo mpampiasa vola vahiny any Dubai. 0000
Toro lalana ara-dalàna hiarovana ny fampiasam-bolanao amin'ny lalàna UAE
Ny fampiasam-bola amin'ny fananana amidy any Emirates amin'ny maha vahiny azy dia mitovy amin'ny fomba any amin'ny firenen-kafa, saingy azo antoka kokoa izany rehefa mahazo torohevitra ara-dalàna any UAE ianao. Mahita entana sy faritra amin'ny tolotra ofisialy ianao, matetika amin'ny alàlan'ny broker. Midika izany fa any UAE dia misy rafitra ara-dalàna roa, ao anatin'izany ny fitsarana nasionaly sy ny fitsarana eo an-toerana. Noho io dia mety misy fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Emirates rehefa miasa miaraka amin'ny olan'ny fananana. Ireto misy torolàlana vitsivitsy hiarovana ny fampiasam-bolanao amin'ny fomba fijery ara-dalàna izay mety ho tianao ho fantatra.
Ny fampiasam-bola amin'ny fananana dia fomba iray lehibe ahazoana tombony sy hampiakarana ny vola miditra aminao, saingy misy ny loza mety hitranga amin'ny tetikasa iray manontolo - indrindra raha tsy mpampiasa vola be any Dubai ianao. Ny lalàna sasany dia hiaro ny fampiasam-bolanao amin'ny mety hisian'ny hetra indroa, ary afaka manana torohevitra ara-dalàna ianao raha misalasala ny amin'ny ara-dalàna.
Tsy mora ny mahazo fananana vazaha any UAE. Ny emirate tsirairay dia tarihin'ny lalàna sy lalàna mifehy ny fivarotana sy fividianana trano sy tany. Ankoatr'izay, ny emirat tsirairay dia manana fahefana mizaka tena amin'ny famoahana ny lalàna sy ny fitsipiky ny lalàna. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny UAE dia manana rafitra ara-dalàna kambana: ny federaly sy ny ambaratonga emirate.
Na dia avela aza ny fananana vahiny, dia misy fetrany ny lohateny amin'ny faritra manokana horesahina amin'ny zom-pirenena sasany. Raha ny ara-dalàna no jerena, ny toerana misy ny trano dia zava-dehibe ho an'ny mpivahiny na ny vahiny hananana trano any UAE.
Na dia avela hanana ny fananana vahiny aza dia misy fetrany ny lohateny.
Raha nanombatombana ny mpikatroka dia nankatoavina tamin'ny alàlan'ny maso ivoho mpanara-maso ary nahita trano amidy amin'ny:
Fitsipika Dubai-Dubai No. 3/2006
Sharjah - Fizarana fisoratana anarana amin'ny fananana
Ajman - Fanapahan-kevitr'i Ras al Khaimah No. 18/2005
Fujairah - Mitadiava torohevitra avy amin'ny Kaomina Fujairah
Umm al Qaiwan - Manombatombana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny Um Al Qaiwan (tranonkala arabo ihany)
Ianao dia efa nanamarina fananana hafa fa efa vita ny fandaharana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny vita;
Mailo ianao fa ohatrinona no homenao vola sy oviana;
Voamarinao fa amin'ny vondrom-piarahamonina safidinao dia afaka mividy trano ianao amin'ny maha mpampiasa vola vahiny anao;
Ianao na ny mpisolovava anao dia nandinika ny antsipiriany voafetra momba ny fifanarahana hahazoana antoka fa adidy inona no anaovan'ny mpamorona raha toa ka tsy vita ilay asa ary azonao ny fe-potoana voakasik'izany;
Ho fanampin'izany, ianao dia mety hanonitra premium izay mazàna ampahany amin'ny saram-pitaterana sy ny vidiny voalohany. Matetika ny karaman'ny solontena dia eo anelanelan'ny 2% - 3%. Tokony hamafisinao izany alohan'ny hidirana amin'ny fifanarahana ary hijerena ny vidiny miafina rehetra.
Misy toerana voatondro ahafahan'ny teratany vahiny mahita 'fananan-tany malalaka'. Miezaha mitady torohevitra ara-dalàna any UAE hiresahana ireo safidy ireo.
Ny valin'ny fikarohana dia afaka manakana anao hialana amin'ny loza mety hitranga amin'ny ho avy ary be mpampiasa. Alohan'ny hidiranao mivantana amin'ny fifanarahana dia mila mitady torohevitra mahaleo tena ianao.
Ny ampahany betsaka amin'ireo teratany vahiny dia mividy drafi-pananana mivantana avy amin'ny mpivoatra anao ary mifampiraharaha irery ianao.
Any Dubai, ohatra, ny lalàna Dubai No. 7/2006 no lalàna manan-kery izay manome teratany vahiny na manam-pahefana hanana fividianana fananana malalaka na hanana usufruct amin'ny fananana hatramin'ny 99 taona. Dubai dia manana fameperana madinidinika amin'ny resaka fananana vahiny. Tsara kokoa raha mieritreritra mitady torohevitra ara-dalàna any UAE ianao alohan'ny hanaovana sonia fifanarahana.
Amin'ny fifanarahana, fantaro tanteraka ny daty famaranana sy ny vanim-potoana miaraka amin'ny vidiny rehetra tafiditra amin'izany.
Raha sendra mampiasa vola amin'ny drafitra tsy fananana trano ianao dia antenao ny handrakotra manodidina ny 10% ho toy ny fametrahana mialoha. Aorian'izany, ny fandoavam-bola amin'ny daty nomena talohan'ny nahavitan'ny trano. Izany dia heverina fa voalaza ao amin'ny fifanarahana nataonao. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fepetra ara-dalàna hahazoana ny serivisy ho an'ny mpisolovava mba hahazoana trano sy trano izay ampianay mafy.
Lisitry ny lisitry ny mpividy
Nodinihinao ny vidiny rehetra ilaina amin'ny fampidirana petra-bola, ary neken'ny mpampindram-bola ny fampindramam-bola, ny saram-barotra, ny sarany fitaterana sns
Efa niresaka tamin'ny tompona trano na agents ianao fa tokony atao antontan-taratasy
Voamarinao fa amin'ny vondrom-piarahamonina safidinao dia afaka mividy trano ianao amin'ny maha-mpampiasa vola vahiny anao
Nahazo fanamarinana momba ny vidiny ianao mba hanamafisana ny fanananao izay novidinao dia omena lanja ara-barotra marina
Ianao koa, dia miambina amin'ny adidy fifanekenao ary nitady izany torohevitra ara-dalàna any UAE ary nanantitrantitra ny ahiahinao momba ireo vatana manan-danja
Alohan'ny anaovanao na inona na inona dia tokony hoeritreretinao izay vola azonao alefa; ianao dia tokony hieritreritra ny tahiry, ny vidin'ny trano, ny saram-pitaterana ary ny saram-pananan'ny mpivarotra trano. Heverinao ny valiny raha toa ka miova ny tsena ary tokony hieritreritra ny fanovana ny vola eo an-toerana mifanohitra amin'ny GBP ihany koa ianao.
Miova matetika ny lalàna momba ny fampindramambola, ary mba hahafantaranao ny dikan'ireo fanovana ireo dia tokony hitazomana hatrany amin'ny vaovao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny taratasy UAE ianao.
Ny lisitr'ireo Borrower:
Nahita mpampindram-bola ianao ary nanamarina izay antenainao harahina isam-bolana sy hoe ohatrinona no azonao indramina.
Nampitahao ny vidin-tsolonao ianao ary efa nanolotra vola ianao fa ny vidin'ny vidin'ny trano iray manontolo.
Raha toa ka nanomboka ny kaonty banky faritra ianao ary nanolotra ny antontan-taratasy ilaina rehetra:
Kara-panondro (raha mety izany)
taratasy avy amin'ny mpampiasa manamarina ny karama
Vao tsy ela akory izay ny vidin'ny fanofana dia nidina, nahatonga ny tsena ho toerana fifaninanana.
Mila mampiasa agents voasoratra anarana ianao. Ho an'i Dubai, ny fangatahana hahitana ny karatra RERA dia mety hanamarina fa ny solontena dia miasa amin'ny fahaiza-manao ara-dalàna ary tsy mandefitra mihitsy, izay tsy ara-dalàna ao UAE. Tokony ho vonona ianao handoa sarany hisolo tena ny 5% amin'ny hofan-trano isan-taona.
Vakio ny fifandraisana ao anatiny ary aza hadino ny mahatakatra izay nosoniavinao. Inona ny adidinao?
Inona avy ireo adidin'ny tompon-trano amin'ny fikojakojana sy fanamboarana?
Amin'ny alàlan'ny rafitra iray antsoina hoe Tawtheeq, misy ny fisoratana anarana an-tsokosoko amin'ny fifanarahana trano any Abu Dhabi. Amin'ny alàlan'ny angon-drakitra iray ho an'ny fifanarahana fifanarahana fanofana fotoana fohy, ity rafitra fisoratana anarana ity dia miaro ny zon'ny mpanofa sy ny tompon-trano.
Azo inoana fa tsy maintsy manome dika mitovy amin'ny pasipaoronao sy ny porofom-ponenanao ianao rehefa mahomby amin'ny fikarohana trano. Amin'izay ianao vao andrasana hametraka 5% amin'ny hofan-trano isan-taona amin'ny tompon-trano hiantohana ny trano. Ho fanampin'izay, antenaina hanome fanamarinana maro aorian'ny daty ianao; mbola miankina amin'ny tompon-trano izany. Zava-dehibe ny hanomezanao rehefa atolotra tsy ho ela ny fanamarinana, hoy ny fifanarahana mazava. Tsara kokoa raha manao photocopie ny chèque mety hatolotrao ianao ho porofon'izay nomena anao.
Voarara ny mandrotsaka tseky any Emirà Arabo Mitambatra raha toa ka atolotra tsy misy vola ampy handoavana ny sarany ny fisavana anao, amin'izay ianao afaka miatrika fisamborana sy fitazonana am-ponja.
Mitadiava bebe kokoa momba ny tsena, miresaka amin'ny mpandraharaha momba ny varotra eto an-toerana, mijery ireo taratasy sy tranokala eo an-toerana
Eritrereto ny fampitaovana eo amin'ny manodidina; satria io dia mety hanatsara ny halavany, ianao koa mila mandinika ny fifamoivoizana ao amin'ny faritra misy anao
Raha toa ka mampiasa mpampiasa iray ianao, dia mila manamarina fa efa nisoratra anarana izy ireo
mila tonga saina ianao amin'izay adidinao ao anatin'ny fifanarahana nataonao - aza hadino ny mijery ireo pirinty kely ireo
Alohan'ny hanaovana sonia ny fifanekena, mieritreritra torohevitra ara-dalàna any UAE tolotra
jereo raha tsy maintsy voasoratra anarana ny contact-nao
tsy maintsy mijery tsara ny fiantohana ny votoatinao ianao
Ilaina ny fanoratana:
Porofo na adiresy
Alohan'ny hanaovana sonia ny fifanarahana, mandiniha torohevitra ara-dalàna ao UAE.